China N'ogbe Egwuregwu Jacquard Fabric Na Scrunch Butt Leggings enweghị nkebi Semụ nwanyị Mmekọahụ Yoga Leggings Manufacturer and Supplier | Wenchang
N'ogbe egwuregwu Jacquard Fabric na Scrunch Butg Leggings enweghị nkebi Sexy Yoga Leggings
Ngwa ngwa kpọrọ nkụ
Nkebi NO KWC21-4079
Ibu ibu 350GSM
Sa ahụ: Ejiri eriri protein na-edozi ahụ siri ike nwee protein. Okwesighi ka ichota ihe ndi ojoo ma sachaa ya na igwe. A ga-emikpu uwe ndị ahụ na mmiri oyi maka minit 5-10. Jiri akwa silk pụrụ iche iji mepụta obere ụfụfụ na-asacha ntụ ma ọ bụ na-anọpụ iche. Ghichaa obere ncha, (ọ bụrụ na ị na-asa obere akwa dị ka akwa silk, shampoo nwekwara ike iji ya nke ọma), na akwa silk nwere agba nwere ike ịsachapụ ugboro ugboro na mmiri dị ọcha. anyanwụ, ma ọ bụ na ọ ga-ewe iwe na draya. Ohaneze, ọ ga-Fikiere ke jụụ ma ventilated ebe. N'ihi na ụzarị ultraviolet dị n'anyanwụ na-adị mfe akwa silk na-acha odo odo, ịjụ oyi na afọ. Ya mere, mgbe ị sachara akwa silk, ọ bụghị ihe amamihe dị na ya ịgbagọ ya iji wepu mmiri. A ga-eji nwayọ maa jijiji, akụkụ ọzọ ga-agbasasịkwa ikuku. Hapụ ya kpọrọ nkụ ruo mgbe ọ ga - ehicha 70% tupu ọ ghaa ma ọ bụ maa jijiji.
Ndetị: Mgbochi ndọlị nke uwe dị njọ karịa nke kemịkal kemịkalụ, yabụ enwere okwu na "enweghị ndọlị abụghị ezigbo silk". Mgbe ịsachara, a na-afụcha uwe ndị ahụ ma ọ dị mkpa ka edetu ha ka ha sie ike, mara mma ma maa mma. Mgbe ị na-afụ ụfụ, hapụ uwe ka ọ kpoo ruo mgbe 70% kpọrọ nkụ, wee fesaa mmiri nke ọma, chere nkeji 3-5 tupu ịkpụ, a ga-achịkwa ọnọdụ ironing n'okpuru 150 Celsius. E kwesịghị imetụ ígwè ahụ aka na silk elu iji zere aurora.
Ichebe: Chebe uwe. Maka uwe ime, uwe elu, uwe ogologo ọkpa, uwe mwụda, pajamas, wdg., A ga-asacha ya ma tinye ya nchara tupu ịchekwa ya. Maka akwa mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri, jaketị, Hanfu, na cheongsam ndị na-adịghị mma iwepụ ma sachaa, a ga-ehicha ha site na nhicha akọrọ ruo mgbe a ga-ehicha ha iji gbochie ebu na nla. Mgbe ịmechara ihe, ọ nwekwara ike rụọ ọrụ na nsị na igbochi pesti. N'otu oge ahụ, igbe na ọkwa maka ịchekwa uwe kwesịrị ka a dị ọcha ma mechie ya ruo ókè o kwere mee iji gbochie mmetọ ájá.
Na mgbakwunye na mmepụta nke yoga akwa, anyị nwekwara uwe eji egwu mmiri, ogologo ọkpa mmiri, uwe egwuregwu, ịgba ọsọ, ejiji ski, ugwu ugwu na-eyi akwa.
Osote: Spandex Jacquard Knitted High Stretch Elasticity Breathable Fabric N'ihi Yoga Cloth
Yoga eyi ákwà